Ungayivuselela kanjani ibha eseceleni yomcimbi we-WordPress kusuka ku-iCal usebenzisa i-Google Khalenda (kanye nokunye okujabulisayo kweGoogle!) | Martech Zone
Ungayivuselela kanjani ibha eseceleni yomcimbi we-WordPress kusuka ku-iCal usebenzisa i-Google Khalenda (nokunye ukujabulisa kweGoogle!)
NgoLwesithathu, July 30, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuleli sonto ngisayine isiza sami sangasese Izinhlelo zokusebenza ze-Google. Bengilokhu ngithola intaba yakwa-Spam kusukela ikheli lami le-imeyili lingakashintshi eminyakeni futhi umphathi wami (yize ngibathanda) bazokhokhisa u- $ 1.99 ngekheli ngalinye le-imeyili lokuvikelwa kogaxekile, okuthile okuthi Gmail yenza mahhala. Futhi, nge-Gmail, usebenza ngama-algorithm akhiwe yizigidi zabanye abasebenzisi ngakho-ke kunembile impela!
I-Google Talk Badge
Kube nezinzuzo ezengeziwe zokuthuthela ku-Google Apps engingazange ngikuqonde, noma kunjalo! Okokuqala ukukwazi ukuhlanganisa uhlelo lokusebenza lwe-Google Instant Messaging, olubizwa nge-Talk, ngqo kubha yami eseceleni nge I-Google Talk Badge.
Futhi, senginakho manje Isazisi seGoogle, engixwayisayo uma ngine-imeyili futhi, kusukela namhlanje, ihlangana ne-Google Apps futhi ingixwayise uma nginemicimbi yekhalenda futhi. Kuyinto isicelo esincane kakhulu.
Ukuvumelanisa i-iCAL Google Calendar
Mhlawumbe izindaba ezinkulu kakhulu kuleli sonto kwaba lapho umngani wami, uBill, athumela khona ngosizo lwe-Google Calendar lweCalDav kanye nokukwazi ukuvumelanisa iCal neGoogle Calendar. Kulula kabi:
Vula Izintandokazi ze-iCal
Faka ikheli lakho le-imeyili ne-password yakwa-Google
Faka ikheli lakho leKhalenda:
Bengingafuni ukwabelana ngekhalenda lami eliyinhloko kubha yami eseceleni ye-WordPress, ngakho-ke ngingeze elinye Ikhalenda ku-Google Khalenda lami bese ngiyifaka nakwi-iCal. Bangu izinkomba zokuvumelanisa amakhalenda akho wesibili ne-iCal. Imane nje i-URL ehlukile.
Ukuhlanganiswa kwe-Google Calendar WordPress
Isinyathelo sokugcina ukufaka i- I-Google Calendar WordPress Plugin ukwengeza iwijethi kubha eseceleni yakho edlula futhi ibonise imicimbi ekhalendeni lakho. Kunokuhluka okuthile ngale plugin, noma kunjalo, okufanele kunakwe ku:
Bhalisela i Idatha ye-Google API Ukhiye, uzodinga ukuthi ungene kuzilungiselelo ze-Plugin.
Uma ufaka ikheli leXML lokuphakelayo kweKhalenda lakho, qiniseka ukuthi ushintsha indawo yokugcina ye-url 'nge-full' ukuze ikheli libukeke kanjena:
i-yourdomain% 40group.calendar.google.com / public / full
usukuString = displayTime.toString ('dddd, MMMM dd, yyyy');
Isihloko sewijethi asiboniswa ngokuya ngeWordPress API nokusebenza okuzenzakalelayo kwewijethi. Umuntu othile ubenhle ngokwanele ukuthi angathumela ukulungiswa kwalokhu ku-Google Code kepha akukakhululwa okwamanje. Nazi izinkomba zokuthi iyiphi ikhodi buyisela ukulungisa izingqinamba zesihloko sewijethi.
Ngalokhu kuhlanganiswe ngokuphelele, manje sengingasebenzisa Isazisi seGoogle noma iCal bese ngifaka umcimbi ozobonakala kubha yami eseceleni! Isikhathi esithathayo sincike kuzilungiselelo zakho zokuvumelanisa phakathi kwe-iCal ne-Google.
Tags: ikhalendaikhalenda le-googleiCalWordPress
Izincomo Zamakhadi Ebhizinisi?
Aug 5, 2008 ku-8: 29 AM
Lokhu bekukuhle! Okuphakelayo kwekhalenda ohlwini lwami lomcimbi ukwengeza okuhle kusayithi lami le-PR http://www.indy-biz.com!
Kuphinda futhi ukufakazela ukuthi uya kumfana ku-WordPress! Ngiyabonga!
Feb 11, 2009 ngo-11: 53 PM
Bekukuhle lokho. Kuzanywe amakhalenda amaningi omcimbi, akutholakalanga afanelekile. I-plugin ye-Google wpng yayifanele ngaphandle kwamaphoyinti angenhla. Futhi, nginolwazi olungu-zero lokubhala. Ngakho…
Ukubonga kwami ​​okusuka enhliziyweni.
Ngo-Apr 26, i-2009 ku-7: i-16 PM
… Ngingeza ukubonga kwami ​​kumaphosta angenhla….
Izibonelo zakho ezisheshayo neziphumelelayo zisizakale ngokumangazayo kumphathi wewebhusayithi eshintshela ku-html iye kwi-wordpress.